Sida loo soo dejiyo waraaqaha waraaqaha ee Huawei Mate 40 Pro | Androidsis
Ka soo dejiso ka hor qof kale waraaqaha Huawei Mate 40 Pro
Shalay waxay maalin weyn u ahayd soo saaraha Shiinaha. Iyo, sugitaan dheer kadib, shirkadda fadhigeedu yahay Shenzhen waxay soo bandhigtay mid cusub Huawei Mate 40 iyo Mate 40 Pro, oo la yimaada hub ku filan oo lagu istaago Samsung Galaxy Note 20.
Iyada oo ay la socoto processor-ka Kirin 9000, marka lagu daro qeybta sawir qaadista oo tilmaamaysa siyaabaha mar kale loogu noqon karo kan ugu fiican suuqa, Huawei Mate 40 Pro waxay noqon doontaa mid ka mid ah kuwa waa weyn ee lagu garaaco baaxadda sare.
Telefoon kasta oo taleefan ah ayaa isticmaali kara sawirrada 'Huawei Mate 40 Pro'
Sida caadiga ah soo bandhigida noocan ah, Huawei Mate 40 Pro waxay la timid waraaqo cusub. Ugu fiican? Waxaad hadda kala soo bixi kartaa sawir-gacmeedkooda rasmiga ah xallinta 2K qalab kasta oo Android ah.
Sida saxda ah, Xitaa haddii aad leedahay terminal aan gaarin xallinta QHD, waad ku raaxeysan kartaa sawir-gacmeedyadan Huawei Mate 40 Pro terminal kasta. Waxaa jira si sax ah 17 sawir oo aad soo dejisan karto, oo leh xallinta sare si aad ugu raaxaysato wax ka badan asal soo jiidasho leh.
Horaan kuugu sheegnay hadii terminal-ku uusan aheyn 2K dhibaato malahan inaad soodejiso Huawei Mate 40 Pro oo aad isticmaasho, marka waxaa haboon inaad siiso aaladaada taabasho kale. Ugu dambeyntiina, waxaan kaaga tagnay iskuxirka soo dejinta adoo adeegsanaya Google Drive si aad ugu raaxeysato sawirradaas xallinta ugu sareysa Sida iska cad, soo degsadani wax kharash ah ma lahan, sidaa darteed cudur daar uma lihid inaad tijaabiso lacagaha rasmiga ah ee boosteejadan.
Maskaxda ku hay in, tayada sare iyo xallinta awgeed, miisaanka feylku ka weyn yahay sida caadiga ah. Wixii loogu talagalay in aan kugula talineyno inaad lahaato isku xirnaanta WiFi si aad u soo dejiso galka in ka badan 100 megabyte halkaas oo aad ka heli doontid waraaqaha waraaqaha ee Huawei Mate 40 Pro. Maxaad sugeysaa inaad isku daydo!
Soo dejiso waraaqaha `` Huawei Mate 40 Pro ''
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Ka soo dejiso ka hor qof kale waraaqaha Huawei Mate 40 Pro
Wax ku iibsiga WhatsApp ayaa ka dhow sidii hore
Redmi K30S waxaa la bilaabi doonaa 27-ka Oktoobar